रक्तअल्पता - को हेमोग्लोबिन स्तर र रगत रातो रगत सेल गणना आवश्यक शारीरिक न्यूनतम तल पतन जसमा पीडादायी अवस्था। यसको घटना (फलाम, फोलिक एसिड, रक्तलायी आदि ...), रंग सूचक र पुनर्जनन डिग्री कारण कि कारण: Anemias विभिन्न मापदण्ड अनुसार वर्गीकृत छन्। एक भन्दा साधारण को - जो ग्रहमा2अर्ब मान्छे असर फलाम कमी रक्तअल्पता।
मात्र 2-2.5 ग्राम - फलाम सूक्ष्म खुराक मा शरीर मा पाइन्छ। एक व्यक्ति को औसत वजन। तर यसको महत्व छैन overestimated गर्न सकिन्छ। यो ट्रेस खनिज हर्मोन को संश्लेषण सहित धेरै चयापचय प्रक्रियाहरू संलग्न छ। त्यसैले फलाम को कमी तथ्यलाई सक्छ एक व्यक्ति थाइरोइड ग्रन्थि लागि दबाइ लिन हुनेछ भनेर। यसबाहेक, यस ट्रेस तत्व सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य को एक कार्य - ऊतक अक्सिजन संतृप्ति (पुछ्ने श्वसन) प्रदान गर्दछ। फलाम कमी asymptomatic (सामान्य स्तर देखि एक सानो विचलन) हुन सक्छ वा सास, थकान, कमजोरी को shortness र यति मा। घ सँगसँगै।
फलाम पूरक रक्तअल्पता वा आहार लागि: यो राम्रो छ
फलाम खाना सम्पर्कमा आउँछ, र पशु मूल (मासु, कलेजो) को उत्पादन देखि यो तरकारी मूल (रस, फल, तरकारी) को एक उत्पादन भन्दा पचाउन धेरै सजिलो छ। फलाम धेरै गरिबी मानव शरीर द्वारा प्रशोधन छ, त्यसैले यो पनि छैन आगमन ट्रेस तत्व को राशि, र आफ्नो Assimilation तीव्रता महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले, केवल एक dietetic खाना असफल रक्तअल्पता छुटकारा गर्न। एक सहायक र एक निवारक उपाय आफ्नो आहार मा समावेश गर्न रूपमा हुनत फलाम मा धनी खाद्य पदार्थ: मासु, बीट, कलेजो र यति मा ..
chelate वा heme - रक्तअल्पता लागि फलाम पूरक विभिन्न पक्षबाट आवश्यक micronutrients समावेश गर्दछ। अझै पनि त्यहाँ पूरा औषधीको छ। intravenously र orally समयमा वा भोजन पछि: तिनीहरूले दुई तरिकामा मानव शरीर मा शुरू छन्। अक्सर, रक्तअल्पता लागि फलाम पूरक यो रगत मा तिनीहरूलाई प्रत्यक्ष प्रविष्ट भन्दा बढी सुरक्षित छ किनभने, syrups र ट्याब्लेटको लिन। प्रभाव मात्र5दिन पछि देखिन्छ, तर त्यहाँ जटिलताहरू पैदा गर्न निदान गलत थियो भने (यदि छैन फलाम-कमी रक्तअल्पता) कुनै खतरा छ।
लागूऔषधको तिरस्कार लागि मुख्य कारण - साइड इफेक्ट लागि। देखि फलाम गरिबी शरीर द्वारा अवशोषित हुन्छ, यो ठूलो खुराक लिन्छ, र शरीर को कुल मात्रा मात्र 1-2% लाग्छ। शेष स्वाभाविक उत्सर्जित, तर दुखाइ, वाकवाकी, एक कुर्सी समस्या, र एलर्जी प्रतिक्रिया पैदा, शरीर मा अझै पनि छ।
तैपनि, बित्तिकै, रक्तअल्पता आवश्यक छ लागि फलाम पूरक लिन तिनीहरूले यो आवश्यक ट्रेस तत्व को कमी को लागि क्षतिपूर्ति गर्न सक्षम छन् रूपमा। यो गर्भवती महिला र बालबालिकाको लागि विशेष गरी साँचो हो। तर दबाइ लिदा यो महत्त्वपूर्ण पक्ष प्रभाव कम गर्न औषधिको खुराक पालन गर्न छ।
थाहा महत्वपूर्ण: पेट, वाकवाकी र अन्य जठरांत्रिय समस्या मा दुखाइ र ऐंठन विभिन्न कारण द्वारा बस एक पक्ष प्रभाव को कारण हुन सक्छ, र फलाम-समावेश तयारी को। यी लक्षणहरू अक्सर pancreatitis छन्, त्यसैले एक व्यक्ति लिन आवश्यक अग्नाशय को क्यान्सर को लागि लागूपदार्थ। उपचार दबाइ को कुनै पनि पाठ्यक्रम सुरु गर्नु अघि, तपाईंले आफ्नो डाक्टर संग परामर्श गर्नुपर्छ।
Neuralgia: लक्षण र उपचार। को अनुहार स्नायु को Neuralgia: लक्षण, उपचार
वंशानुगत रोग - आफ्नो कारण
परेवा मा न्यूक्यासल रोग: लक्षण, रोकथाम, उपचार
Psoriasis पारित छ वा छैन? psoriasis कसरी खतरनाक छ?
चिया लागि मीठो आनन्द: प्लम को एक रोचक मिठाई
कसरी Windows7मा ग्राफिक्स कार्ड स्तरवृद्धि गर्न? Windows को लागि भिडियो कार्ड 7
Vitex पवित्र: गुण, आवेदन, समीक्षा
जान्न चाहने सुन्दर फूल कसरी आकर्षित गर्ने?